DIORANO WASH BETSIBOKA : Noentanina hanome rano ny sekoly sy ny CSB ny mponina
Taorian’ny atrikasa natao momba ny fitantanana ny rano ao amin’ny Faritra Betsiboka, dia nidina ifotony nijery ireo sekoly sy CSB teny amin’ny lalam-pirenena fahefatra, ao anatin’ny faritra izy ireo, ny alarobia sy alakamisy lasa teo. 17 mai 2017
Ny kaominina Mahatsinjo, Tsiafabositra, Andriba, Antanimbary, Maevatanàna ary Ambalanjanakomby no notsidihina tamin’izany. Ka ny Talem-paritry ny rano no nitarika izany niaraka tamin’ireo ekipa ao anatin’ny vovonana Diorano Wash.
Voalaza fa mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin’ny sekoly sy ny tobim-pahasalamana izay rehetra notsidihina saingy misy indro kely dia ny fahasahiranana eo amin’ny rano ampiasaina. Misedra olana tahaka ny ao Maevatanàna ihany koa mantsy ireo toerana rehetra ireo rehefa maina ny tany. Ritra ny vovo, zara raha ahitana rano ny renirano manodidina rehetra hany ka mijaly ny mpiasa sy marary tonga mitsabo ao amin’ny tobim-pahasalamana.
Ny fanasana ireo fitaovana izay tena saro-pady tanteraka amin’ny fitsabona marary, ireo mpianatra indray tsy misy rano hidiovana mialoha ny hidirana any an-tsekoly na rehefa avy mivalandrano sy mangery.
Nandritra io fitsidihana io dia nisy hatrany ny fanentanana amin’ny fanasana tanana amin’ny savony natao, indrindra tany amin’ireo sekoly. Izy ireo mantsy no malaky mandray indrindra sy mampita ny fahalalany amin’ny mpiara-monina manodidina azy. Ka ny ankizivavy no nomena tombony manokana amin’ny fampianarana azy ireo hanadio ny tenany sy ny mahavehivavy azy. Ny solontenan’ny Tily eto Mdagasikara sy ny Vokovoko mena Malagasy no nampita ny teknika tsotsotra momba izany tamin’izy ireo. Nambara tamin’izy ireo fa saro-pady tanetraka ny fivaviana ka tokony hotandremana tsara mba tsy hidiran’ny aretina.
Nitohy tamin’ny fivoriana ny zoma 12 mey teo io fidinana ifotony natao io, ka nisy soson-kevitra vojimaika nomen’ny Talem-paritry ny Rano, dia ny fahafahana mameno barika ho an’ny tobim-pahasalamana sy ny sekoly mialoha ny hakan’ny vahoaka tsirairay rano. Ireo mantsaka eny amin’ny paompy no voakasik’izany eto. Mba hahafahan’ny mpitsabo manao tsara ny asany araka izay tokony ho izy. Ny mpianatra afaka mianatra tsara ao anatin’ny fahadiovana tsy misy ahiahy. Ka dia io aloha izany no atao mandra-pahita fomba hafa indray.